बिदाईको बेला बेहुलीले गरिन् यस्तो हर्कत, जन्तीहरुनै छक्क परे (भिडियो सहित) – List Khabar
Home / मनोरंजन / बिदाईको बेला बेहुलीले गरिन् यस्तो हर्कत, जन्तीहरुनै छक्क परे (भिडियो सहित)
admin November 27, 2021 मनोरंजन Leaveacomment 116 Views
विवाह सम्बन्धी यो अनौठो घटना पढेर टाईटल सँग सम्बन्धित भिडियो हेरौं.. कहिलेकाहीँ अनौठा घटना हुन्छन्, जसलाई हामीले पत्याउन पनि मुस्किल हुन्छ । नेपालसँगै सिमा’ना जोडिएको भारतीय राज्य बिहा’रस्थित भभुआ शहरमा यस्तै एउटा रोचक घट`ना भएको छ । यो सहरमा एकजना बेहुली सुहागरातकै दिन बेहुलाको घरबाट सबै सामान लुटे’र फ’रार भएकी छन् ।
सुहागरातकै दिन आफ्ना नयाँ पतिको घर रित्याउने बेहुलीको नाम हो संगीता । उनका आमा-बाबु छैनन्, उनी एउटा नातेदारकहाँ बस्दै आएकी थिइन् ।
पीडित पक्षका अनुसार बुहारी बना’एर ल्या’इएकी युवतीले गहना र नगद तथा घरका अन्य सामान लिएर फरार भएकी हुन् । यो घटना २२ जुलाईको हो । जानका’री अनुसार शिला देवीका ४० वर्षीय छोरा पंकज कुमारको बिहे २५ वर्षीया संगीता कुमा’रीसँग भएको थियो । दुवैको बिहे धुमधाम’सँग एउटा मन्दिरमा भएको थियो ।
बिहेपछि संगीता नवदु’लाहासँगै नयाँ घरमा पुगिन् । सुहाग’रातका लागि पंकज र संगीताको कोठा’लाई फूलले पनि सजाइयो । तर लु’टेरा बेहुलीको योजना अर्कै थियो ।
उनले बहाना बनाएर पति’सँग सुत्न इन्का’र गरेर अर्कै कोठामा सुतिन् । भोलिपल्ट जब पंकज र उनका परिवा’रका सदस्यको निद्रा खुल्यो तब बेहुली करिब १ लाख ९० हजारको गहना र ३६ हजार रुपैयाँ नगद’सहित फरा’र भइ:सकेकी थिइन् ।
यो घटना सार्वज’निक भएपछि पंकज’को घरमा हंगामा भयो । त्यसपछि पीडित पक्षले लमीलाई बोलाएर फरार बेहुली उप’स्थित गराउन चेतावनी दिएका छन् । संगीताको बिहे’का लागि लमीको काम गरेका व्यक्तिले पंकजका परिवा’रलाई फरार बेहुलीलाई २ देखि ४ दिनमा ल्याउ’ने आश्वासन दिएका थिए ।
तर फरार दुल’ही फिर्ता नआएपछि पीडित प:रिवारले लमी र दुलहीविरुद्ध पुलिसमा जाहेरी दिएका छन् । लमी पनि ती युवतीका नातेदार भएको खुले’को छ। अहिले’सम्म बेहुली फरार छिन् भने पुलि’सले यो मामिलाको जाँच गरिरहेको छ ।
माथि टाईटल सँग सम्बन्धित भिडियो हेर्नु`होस…
Previous के तपाइको यस्तो बानि छ ? छिट्टै बुढ्यौलीतिर धकेलिनु होला है !
Next शिक्षकलाई नै किन चौमासिक तलब, अब मासिक तल’ब दिइने भयो यस्तो निर्णय